२३ वाणिज्य बैंकले गरे लगानीकर्तालाई लाभांश दिने घोषणा, कुन बैंकको कति ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal२३ वाणिज्य बैंकले गरे लगानीकर्तालाई लाभांश दिने घोषणा, कुन बैंकको कति ?
Home अर्थ २३ वाणिज्य बैंकले गरे लगानीकर्तालाई लाभांश दिने घोषणा, कुन बैंकको कति ?
काठमाडौं : नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत २७ वाणिज्य बैंकमध्ये २३ बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नाफाबाट लगानीकर्तालाई लाभांश दिने घोषणा गरेका छन्।
चार बैंकहरुले भने अझै गत वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका छैनन्। लाभांश घोषणा नगर्नेमा नेपाल बैंक, एनसिसी बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक र सिभिल बैंक रहेका छन्।
सिभिल र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ साधारणसभा आजसम्म गरेका छैनन्। सिभिल बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमोदन गराएर पनि साधारणसभा गरेको छैन।
केही बैंकले आफूले घोषणा गरेको लाभांश साधारणसभाबाट पारित गरिसकेका छन् भने अधिकांश बैंकले साधारणसभाको मिति तय गरिसकेका छन्। तर, यसपटक बैंकहरुले अधिकांश बैंकहरुले नगद लाभांशलाई प्राथमिकतामा राखेर लाभांश घोषणा गरेका छन्।
बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले घोषणा गरेको लाभांशलाई राष्ट्र बैंक र बैंकको आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्रै लगानीकर्ताले पाउनेछन्।
सबैभन्दा बढी लाभांश इन्भेष्टमेन्टको
हालसम्म लाभांश घोषणा गर्ने बैंकमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बोनस र नगद दुवैतर्फ सबैभन्दा धेरै लाभांश दिने घोषणा गरेको छ। नबिलले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै नाफा कमाए पनि लाभांश भने इन्भेष्टमेन्टले धेरै दिने घोषणा गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा नबिल बैंकले ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। त्यस्तै इन्भेष्टमेन्टले ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कमाएको थियो।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकले हाल कायम रहेको १० अर्ब ६४ करोड ५५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न लागेको हो। बैंकले १८ प्रतिशत बोनस सेयर र २२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको हो। बैंकले प्रस्ताव गरेको बोनस सेयर वित्तरणपछि चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ५६ करोड १८ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ।
त्यस्तै, नबिल बैंकले गत वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई ३४ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ। बैंकले १२ प्रतिशत बोनस सेयर र २२ प्रतिशत नगद लाभांश दिन लागेको हो। बैंकको हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ४ करोड ३२ लाख २१ हजार रुपैयाँको १२ प्रतिशत बोनस सेयर वित्तरणपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ८४ लाख ७ हजार रुपैयाँ पुग्ने छ।
साथै सिद्धार्थ बैंकले ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ८ दशमलव १६ प्रतिशत नगद लाभांशसहित १३ दशमलव १६ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १७ दशमलव ५० प्रतिशत नगद लाभांश, एभरेष्ट बैंकले २० प्रतिशत नगद लाभांश, एनएमबी बैंकले १० प्रतिशत बोनस सेयर, २० प्रतिशत नगद लाभांश गरी ३० प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ। यता सानिमा बैंकले १४ प्रतिशत नगद लाभांश, एनआइसी एसिया बैंक १० दशमलब ५२ प्रतिशत नगद लाभांश, माछापुच्छ्रे बैंकले १० प्रतिशत नगद लाभांश, नेपाल बंगलादेश बैंकले १० दशमलव ५३ प्रतिशत नगद लाभांश, कुमारी बैंकले १२ दशमलव ७५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट जनता बैंक नेपालले ८ दशमलव ५० प्रतिशत नगद लाभांश, ग्लोबल आइएमई बैंकले १६ प्रतिशत बोनस सेयर, बैंक अफ काठमान्डूले १४ प्रतिशत बोनस सेयर र ११ नगद लाभांशसहित २५ प्रतिशत लाभांश, नेपाल एसबिआई बैंकले १० दशमलव ७९ प्रतिशत नगद लभांश र ५ बोनस सेयरसहित १५ दशमलव ७९ प्रतिशत लाभांश, सनराइज बैंकले ११ दशमलव ५ प्रतिशत नगद लाभांश र सिटिजन्स बैंकले ३ दशमलव ६३ प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलव ६४ प्रतिशत नगद लाभांश गरी ५ दशमलब २७ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो।
यता लक्ष्मी बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट ८ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस सेयर र शून्य दशमलव ४५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कुमारी बैंकले ८ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको कृषि विकास बैंकले २१ दशमलव ०५ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ।
मेगा बैंकले ६ दशमलव ८५ प्रतिशत नगद लाभांश र १ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ। प्रभु बैंकले ५ दशमलव २६ प्रतिशत नगद लाभांश र ५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ। प्राइम कमर्सियल बैंकले १६ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ।